Warbixinta ku saabsan Mareykanka ee Ka-noqoshada Heshiiska Cimilada ee Paris
Juun 2, 2017
Machadka McKnight wuxuu si qoto dheer uga niyad jabay go'aankii Madaxweynaha ee ahaa inuu Mareykanka ka baxo heshiiska caalamiga ah ee cimilada.
Go'aankaan wuxuu u taagan yahay dib u dhac ku yimid dhammaan kuwa ku nool meeraha, kuwaas oo khatar ku ah caafimaadka iyo fayoqabka ee jiilalka hadda iyo mustaqbalka. Waxay u muuqataa in ay ka muuqato aragtida dadka badankooda Americans. Waxay iska indho-tiraysaa aragtida sayniska ee culus, waxayna ka hor imaanaysaa jagada hoggaamiyeyaasha shirkadaha waaweyn ee u arkaan in tamarta nadiifku tahay qaybta ugu dhaqsaha badan dhaqaalaha adduunka. Waxay fahamsan yihiin in isku xirnaanta dhaqaalaha yar-yar ee carbon-ka uu abuuri doono shaqooyin cusub oo gacan ka geysan doona ilaalinta tartan caalami ah.
Maadaama ay tahay deeq-bixiye iyo maalgeliye hay'adeed, McKnight ayaa si adag u go'aamiyay in si deg-deg ah loo xoojiyo ku-wareejinta mustaqbalka tamarta nadiifka ah. Waanu qadarinaynaa faa'iidooyinka caafimaadka, dhaqaalaha, iyo deegaanka ee nadiifta nadiifta ah ee keena gobolka Minnesota iyo wixii ka baxsan. Tan iyo 1992, McKnight wuxuu bixiyay in ka badan $ 173 milyan oo loogu talagalay ururrada hormaraya mustaqbalka yar-yar. Marka laga soo tago deeq-lacageedka, waxaan ka go'nay in ka badan $ 420 milyan oo ah maal-galinta ku habboon yoolalka yaryar ee udubdhexaadka ah, waxaanan u isticmaalnaa codkayaga saamileyda si ay u dalbadaan weynaanta khataraha cimilada maalgalintayada.
Waxaan ku faraxsanahay dedaalka ay noo fidiyeen deeq bixiyeyaasheena, iyo sidoo kale dhammaan duqaayadaha, guddoomiyayaasha gobollada, saamileyda, ganacsatada iyo hoggaamiyeyaasha bulshada, iyo jaaliyadaha dalka oo dhan oo horey u qabsaday hannaanka hoggaanka tamarta nadiifka ah iyo horumarinta xalal cusub. Wax kasta oo ay ku dhacaan Washington, xalalkeenu maaha mid aan kacsanayn oo aan sii soconayno oo aan la joojin karin.